— Ugu yaraan sagaal ruux oo Soomaali ah ayaa lagu dilay in ka badan 40 kalena waa lagu dhaawacay dagaallo dalka Yemen ku dhex-maraya kooxo diimeedyo Sunni iyo Shiico ah. |
— Ugu yaraan sagaal ruux oo Soomaali ah ayaa lagu dilay in ka badan 40 kalena waa lagu dhaawacay dagaallo dalka Yemen ku dhex-maraya kooxo diimeedyo Sunni iyo Shiico ah.
Dagaalkan oo ka socda deegaan aad u yar oo lagu magacaabo Damaaj ayaa oo ku yaalla waqooyiga dalka Yemen iyadoo loo diiday inay galaan hay’daha ka shaqeeya caafimaadka, iyadoo dagaalka uu fooda sii geliayaa bishii sadexaad.
“Waxaa dagaalkan uu u dhexeeyaa kooxo diimeedyo Sunniyiin iyo Shiico ah oo ku nool deegaankaas, waxaana ka dhashay dagaalladan khasaare nafeed oo aad u fara badan,” ayuu yiri Maxamed Bukhaari oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta machad diinta Islaamka laga barto oo halkaa ku yaalla.
Maxamed Bukhaari oo u warrramayay laanta af Somaaliga ee VOA-da ayaa sheegay inuu dagaalkan u muuqdo mid ay dabada ka riixayaan dalal awood leh oo oo aan Islaam ahayn, kuwasoo ka xun nimcada uu Alle siiyay dalka Yemen.
Deegaankan ay dagalaladu ka socdaan ayaa wuxuu ku fadhiyaan dhul dhan 1-KM oo isku wareega ah, waxaana ku hareeraysan kooxaha diimeedka Shiicada ah ee Xuutiyiinta loo yaqaanno, kuwaasoo diiday inay galaan ha’yadaha bisha Cas iyo Laan-qayrta cas si ay u daweeyaan dadka dhaawcyadu soo gaareen.
“Intii uu socday dagaalka waxaa ku dhintay in ku dhow 184 oo qof oo sagaal ka mid ah ay yihiin Soomaali ay ku jirto hal dumar ah, waxaana dhaawaca uu gaarayaa 500 oo qof oo ay 43 ka mid ah yihiin Soomaali, mana jiraan cid daweynaysa, maadaama wadada deegaanka laga galo ay fadhinaan kooxda Xuutiyiinta ah oo la dagaalsan Sunniyiinta,” ayuu yiri Bukhaari mar kale yiri.
Sidoo kale, ardayga Soomaaliyeed wuxuu sheegay inay jiraan dad ka badan 38-qof oo la la’yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen, iyadoo dowladda dalka Yemen ay ku guuleysan wayday tan iyo xiligaas inay dagaalka joojiso.
Damaaj ayaa waxaa ku nool 7,000 oo qof oo muslimiin ah kuwaasoo isaga yimid caalamka dacaladiisa si ay diinta Islaamka uga bartaan machad ku yaala deegaankaas oo uu wax ka dhigo Sheekh looga dambeeyo barashada diinta Islaamka.
Soomaalida ku nool deegaankaas ayaa lagu qiyaasayaa inay tiradoodu tahay 300 oo qoys oo qaarkood kasoo guuray dalalka reer galbeedka kuwaasoo caruurtoodu u keenay inay halkaas wax ka bartaan, iyadoo dadka ku nool deegaankaas ay ku jiraan go’doon.
Magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen ayaa waxaa maalin walba ka dhaca dibad-baxyo dowladda looga dalbanayo inay ku qanciyaan kooxaha Xuutiyiinta ah in magaaladaas ay go’doonka ka qaadaan, taasoo illaa hadda aan lagu guleeysan.
Hoggaamiyeyaasha dalalka urur Goboleedka IGAD oo War-murtiyeed kasoo saaray shir ay kaga haleen Colaadaha Koonfurta Sudan
12/27/2013 7:27 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Hoggaamiyeyaasha ururka dalalka IGAD oo maanta kulan ay albaabbadu u xirnaayeen ayna kaga hadlayeen colaadda dalka Koonfurta Suudaan ka taagan ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo kulankoodaas kasoo saaray war-murtiyeed wadajir ah.
Ra’iisul wasaaraha Somalia Cabdiweli Sheekh oo xalay la kulmay haween ka socday Gobollada dalka iyo Magaalada Muqdisho
12/27/2013 7:04 AM EST
Jimco, December 27, 2013 (HOL) — Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sh. Axmed Maxamed oo xalay kulan la qaatay haween ka socday gobollada dalka qaarkood iyo weliba magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlay sidii haweenka ay kaalin muhiim ah ugu yeelan lahaayeen hoggaaminta dalka.
Ganacsato Soomaaliyeed oo kasoo Cararay Colaadaha ka taagan Koonfurta Suudaan oo soo gaaray Magaalada Kampala
12/27/2013 6:19 AM EST
Jimco, December 27, 2013 (HOL) — Soomaali badan oo ganacsiyo kala duwan ku haystay magaala madaxda Koonfurta Suudaan ayaa la sheegay in saacidihii la soo dhaafay ay soo galeen magaalada Kampla ee caasimadda Uganda, iyagoo kasoo cararay colaadaha sii kordhaya ee halkaasi ka jira.
Qarax geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Degmada Dayniile ee Gobolka Banaadir
12/27/2013 6:14 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Ugu yaraan 11-qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay maqaahi ay inta badan fariisan jireen ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku taalla degmada Dayniile.
Itoobiya oo Sheegtay inay Fashilisay Qaraxyo ay Al-shabaab doonaysay in ay ka geystay Magaalooyinka Addis Ababa iyo Jigjiga
12/27/2013 6:07 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Saraakiisha ammaanka Itoobiya ayaa ku eedeeyay Al-shabaab inay ka dambeysay weerar noociisu ahaa mid is-miidaamin ah oo ay doonayeen inay ka geystaan magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya.
Booyadaha biyaha u dhaamiyaha Hargeysa oo ku dhawaaqay shaqo joojin iyo saameynta ay ku yeelanayso shacabka (SAWIRRO)
12/27/2013 5:50 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Booyadaha biyaha u dhaamiya xaafadaha magaalada Hargeysa, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin ka dib markii ay sheegeen in lagu kordhiyey cashuurtii waddo marista.
Ururka Midowga Warbaahinta Soomaaliya oo looga Dhawaanay Muqdihso & Ma’suuliyiin kala duwan oo ka hadlay (SAWIRRO)
12/27/2013 3:36 AM EST
Jimco, December 27, 2013 (HOL) — Urur ay ku midoobeen ku dhawaad 20 idaacadood ayaa shalay oo Khamiis ahayd looga dhawaaqay Hoteel Jazeera ee magaalada Muqdisho, waxaana goob-joog ka ahaa wasiirka warfaafinta, boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka Soomaaliya, Cabdulllaahi Ciilmoge Xirsi, afhayeenka madaxtooyada Inj. C/raxman Yarisow, afhayeenka xukuumadda, Ridwaan X. C/weli, afhayeenka gobolka Banaadir, Maxamed Yuusuf Cismaan, afhayeenka booliiska Soomaaliyeed, xildhibaanon, ururrada bulshada rayidka iyo ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Ciyaaraha Soomaalida ee Hirda Amsterdam AFT 2013 oo dalka Holland lagu soo gaba-gabeeyay (DAAWO SAWIRRO)
12/27/2013 2:09 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Waxaa magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands lagu soo gaba-gabeeyay cayaaraha Soomaalida ee HIRDA AFT 2013, kaasoo sannadkii sagaalaad ka dhacay Holland, iyadoo sanadkan lagu xusayay hoggaamiyihii dalka Koonfur Afrika ee dhawaan geeriyooday Nelson Mandella.
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo Furay Kulanka Wadatashiga Mustaqbalka Dhallinyarada Soomaaliyeed (SAWIRRO)
12/27/2013 1:40 AM EST
Jimco, December 27, 2013 — Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sh. Cismaan Jawaari ayaa furay kulanka wada-tashiga ah oo looga hadlayay mustaqbalka dhallinta Soomaaliyeed kaasoo uu soo qaban-qaabiyey naadiga dhallinyarada baarlamaanka Soomaaliya.